Heesaha | What the hell you are looking for.
Naftii huruha JWXO wuu ka adkaysin badan yahay dadka intiisa kale, wuuna ka samir badan yahay, wuxuuna maanka ku hayaa inuu laba wanaag mid uun hali. “Dhimasho loogu danbi dhaafo ama guul lagu naalloodo”. Naftii huruhu wuxuu rumaysan yahay inuu ku taagan yahay waddadii xaqa ahayd, isla markaana uu guusha gaadhi doono, mar ay noqotaba. Wuxuuna hadh iyo habayn heegan u yahay inuu cadowgiisa wiiqo, oo cudud u sheegto calooshood u-shaqaystayaasha Itoobiya ku soo daabushay dalka Ogaadeenya.
Hase yeeshee nasiib wanaag awooddaas oo dhami waxay noqotay mid fulin wayda himiladii cadowga ee ahayd in la wiiqo halganka xaqa ah ee Ogaadeenya ka socda. Waxay noqotay mid ka gaabisay qorshayaahsii uu gumaysigu maanka ku hayay ee ahaa inuu dadwaynaha Ogaadeenya ee keena-diidka ah awood ku muquuniyo, si uu ugu gacan bannaanaado boobista khayraadka dabiiciga ah ee dhulkiisa Eebe ku mannaystay.
Dabeecadaha gumaystaha lagu yaqaano waxaa ka mid ah inuu dadwaynaha rayadka ah ku cargaagtamo, marka goobaha dagaalka iyo kuwa diblumaasiyadeed lagaga guulaysto. Toddobadii sano ee ugu denbeeyay wuxuu gumaysigu dalka Ogaadeenya ka waday xasuuq ba’an oo sahayday kumannaan ka mid ah shacabka aan waxba galabsanin ee Ogaadeenya. Wuxuu sidoo kale xabsiyadiisa naxariis darrada ah ka buuxiyay tiro intaas aad uga sii badan, kuwaasoo loo gaysto jidhdil iyo arrimo kale oo bani’aadamnimada ka dhan ah. Gumaysigu wuxuu gubay tuulooyin iyo aqallo soomaali aan tiro lagu soo koobi karin.
Gumaysigu wuxuu sidoo kale dadwaynaha Ogaadeenya ka ugaadhsadaa wadammada jaarka la ah Ogaadeenya, sida Soomaaliya, Kenya iyo Jabuuti. Waxaa jira dad badan oo Ogaadeenya u dhashay oo siyaabo kala duwan loogu laayay xeryaha qoxootiga ee Kenya iyo meelo kale oo Kenya ka mid ah, waxaana ugu denbeeyay Alla ha u naxariistee C/risaaq Tiibaa iyo Cbadi C/llaahi. Dilalka fulaynimada ah ee noocanoo kale ah waxaa ka denbaysa xukuumadda gumaysatada Itoobiya, oo markay ku fashilantay dagaalkii gudaha Ogaadeenya ka socday doonaysa inay dagaalka meelo kale u rarto, hase yeeshee waxaa xaqiiqo ah inay midkana ugu guul-darraysan doonto sidii ay kii horaba ugu guul-darraysatay.
In kastoo denbiyada uu gumaysigu ka galayo dadwaynaha Ogaadeenya ay yihiin kuwo laga xanuunsanayo oo jidhku ka gubanayo, haddana waxay dadwaynaha laftoodu aaminsan yihiin in denbiyadaasi ay yihiin kuwo la filayay oo lagu talagalay markii la qaatay go’aanka ah in dalka laga xoreeyo gumaysiga Itoobiya. Waxay aaminsan yihiin inaanay jirin waddo sahlan oo xorriyada loo maro. Xorriyadu waxay ku timaadaa dhiig daata iyo dhib loo badheedho, waxayna u baahan tahay dulqaad iyo adkaysi loo yeesho dhibaatooyinka ku meermeersan.
Hase yeeshee in kastoo dadwaynaha Ogaadeenya iyo naftii huraha JWXO-ba ay ku talagaleen dhibaatada dhinaca gumaysiga kaga imanaysa, haddana ma oggolaan doonaan in dhiiggoodu hadur noqdo, waxayna hubaan inay oohintu ku denbayn doonto gumaysiga iyo inta u adeegaysa.
Wadani Abdirauf OYSU-SWEDEN abuuazhar@hotmail.com